Ozi kacha ọhụrụ gbasara Federal Aviation Administration si Nigeria & ụwa | TAA
Nwa nwoke Jacob Zuma ka ebubo ya na igbu ọchụ
Ndi gọọmentị gọọmentị gọọmentị na-eme ihe ike - n'ebube NTA
Joey Barton nkwado Sam Allardyce kwadoro ọrụ Fleetwood
Roy Hodgson na-agba Wilfried Zaha ume igosi ike n'agbanyeghị na ọ bụ ...
Arsene Wenger ịhapụ njedebe nke oge Arsenal
Nwanyị gburu mgbe ụgbọ mmiri jet na-adaba na ụgbọ elu US
Ọgba aghara a na-akụ azụ na ụgbọ elu Southwest Airlines si New York ruo Dallas gburu nne na abụọ na-amanye mberede na mberede Tuesday, ihe mbụ nwụrụ anwụ na ọdụ ụgbọelu US ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri.
Ụgbọ elu abụọ jikọtara na ọdụ ụgbọ elu, na-egbu ndị ọkụ ọkụ abụọ
Ndi oru ogbagba ndi Indiana abiara na Monday mgbe obere ụgbọelu dara ma gbaa oku mgbe ha nwusiri, ndi ochichi kwuru.
Ndị ọrụ ụgbọelu na-enwe obi ụtọ na njigide nke CAT 1 na Nigeria
Ulo oru agha nke onwa na Wednesday jara aka oru nke ndi isi obodo nke ndi ozo maka ijigide obodo nke otu udi otu (CAT 1) mgbe nchoputa ndi ozo no.
Ịrụ ọrụ ụgbọ elu na mba ndị ọzọ na - arụ ọrụ siri ike - onye injinia ụgbọ elu
Enwe. John Ekundayo, onye injinia ugbo na otu n'ime ndi na-ebu ulo, n'okwu ya, kwuru na ijuputa ugwo na ugbo elu na mba ndi ozo na-eme ihe siri ike maka ugbo ala.
Ihe mere ndị mba ọzọ ji eburu ụgbọ elu nke Africa - ọdụ ụgbọ elu Etiopia
Maazị Esayas WoldeMariam Hailu, Onye isi na-ahụ maka ọrụ, Òtù Na-ahụ Maka Ịrụ Ọrụ Mba Nile nke Etiopia, enyela nghọta ihe mere ndị mba ọzọ ji esi na West na Middle East na-achị ụwa.
US na - atụ egwu ịhapụ ụgbọ elu ụgbọ elu Nigeria maka nsogbu nchekwa
Gọọmenti etiti mba dị iche iche nke United States nyere ndị ọrụ ụgbọelu Nigeria ihe kachasị ụbọchị 65 iji dozie nsogbu nchebe ma ọ bụ ihe ize ndụ ka a na-egbochi iji ụgbọ elu gaa mba ya.
Ụlọ ọrụ ụgbọelu na United States na-amalite nyocha nke ụlọ ọrụ ụgbọelu Nigeria
Ụlọ ọrụ United States Federal Aviation Administration (FAA) amalitela nyochaa nke ụlọ ọrụ ụgbọelu nke Naijiria na nleta nke Njikọ Ọgbọ Na-ahụ Maka Nleba Na Nigeria (NCAA) ụnyaahụ.
Joey Barton etinyewo aka ya kachasị ike ma site n'itinye nzọụkwụ mbụ dị ka onye isi nchịkwa na Fleetwood, dị ka onyeisi onye na-elekọta oge ochie, bụ Sam Allardyce.
Ndị ọkàiwu na South Africa ga-ebubo onye isi oche bụ Jacob Zuma nwa nwoke, Duduzane, na igbu ọchụ, mgbe otu ụgbọ oloko 2014 mere ka otu nwanyị nwụọ, otu ọnụ na-ekwuchitere ya, na-agbanye mkpebi mbụ ka ọ ghara ime otú ahụ.
US, Naijiria na-enwe mgbakọ ndị agha na Abuja
Ndị agha ndị agha si n'ofe Africa na Monday si na United States kwadoro otu nzukọ nke United States kwadoro iji mee ka mba dị iche iche na-alụso òtù ndị na-eme mgbaasị ọgụ.
Aruna Quadri: Ahịa ọlaọcha karịa ọla
Aruna Quadri nke Naijiria kwuru na obi dị ya ụtọ na ọ na-arụ ọrụ na Gold Coast 2018 Commonwealth Games na Australia n'agbanyeghị na-enweta ọlaọcha na tebụl tebụl tenles omume.
Mkparịta ụka maka Anthony Jọshụa, Deontay Wilder agha na-abawanye na New York
Onye nkwado bụ Eddie Hearn ga-enwe nzukọ na ndị Deontay Wilder na New York n'izu sochirinụ ka mkparịta ụka na-aga n'ihu maka ọgụ megide Anthony Jọshụa maka oke egwu ụwa niile.
N22.1bn aghụghọ: Ex-CAS okwu Amosu kwuru n'ihu onye ọka iwu ya - Onyeàmà
Onye isi ikpe na-agba akaebe, Mr Tosin Owobo, na Wednesday, gwara Ụlọikpe Ukwu Federal, Lagos, na nkwupụta nke onye isi ọrụ ụgbọelu, Air Marshal Adesola Amosu, na Economic Economic Financial Commission (EFCC), weere na ọnụnọ ọkàiwu ya.
Ndị uweojii na-ekpechite ọnụ ndị Senate, ndị isi ọrụ nzuzo na-ezu ohi
Onye nzuko ahụ akpọwo Ibrhaim Idris, onye nyocha nke ndị uweojii; na Lawan Daura, onye isi nchịkwa nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị State (DSS) maka ịzọrọ nke senate nwanyị.
Etiopia ga-enye nwa okorobịa olu, mee ihe ndị ruuru mmadụ -...
Gunman na-egbu CAC pastọ na Ondo
Venezuela's Maduro na-akpọ maka agha agha mgbe egwu egwu
Kyle Walker: England chọrọ ọrụ ebube iji merie ụwa
Prọfesọ Onyido: Ụlọ akwụkwọ dị na Nigeria na-achọpụta "ndị ọkachamara na ịntanetị"
Arsene Wenger kwadoro Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette mmekorita